Bit By Bit - Running kuedza - 4.5.3 Zvivakire chigadzirwa chako
Kuvaka iwe pachako chigadzirwa nderengozi yakakwirira, yakakwirira-mubayiro. Asi, kana ikashanda, unogona kubatsirwa nemashoko akanaka eloop inobatsira kutsvakurudza kwakasiyana.
Kutora nzira yekuvaka iwe pachako kuedza imwe danho rinopfuurira mberi, vamwe vatsvakurudzi zvirokwazvo vanovaka zvigadzirwa zvavo. Izvi zvinokanganisa vashandisi uye zvino vanoshumira sezvikwata zvekuedza uye mamwe marudzi ekutsvakurudza. Semuenzaniso, boka revatsvakurudzi veYunivhesiti yeMinnesota rakagadzira MovieLens, iyo inopa rusununguko, rusingabatsiri rwemagariro evanhu mafirimu. MovieLens yakashanda zvakapfuurira kubva muna 1997, uye munguva ino 250 000 vakanyoresa vashandisi vakapa mamiriyoni makumi maviri nemakumi maviri emavhidhiyo emafirimu anopfuura 30,000 (Harper and Konstan 2015) . MovieLens yakashandisa nharaunda inoshandiswa yevashandi kuti vaite tsvakurudzo inoshamisa kubva pakuedza shanduko yezvesayenzi nezvemipiro yezvigadzirwa zvevanhu (Beenen et al. 2004; Cosley et al. 2005; Chen et al. 2010; Ren et al. 2012) kutarisana sarudzo dzekugadzirisa zvirongwa (Rashid et al. 2002; Drenner et al. 2006; Harper, Sen, and Frankowski 2007; Ekstrand et al. 2015) . Zvakawanda zvezviongorori izvi hazvingave zvichibvira pasina vatsvakurudzi vane kutonga kwakakwana pamusoro pechigadzirwa chaicho chekushanda.
Zvinosuruvarisa, kuvaka chigadzirwa chako chinoshamisa zvikuru, uye iwe unofanira kufunga pamusoro payo sekuumba kambani yekutanga-upi: huwandu hwehuwandu, hukuru-mubayiro. Kana ukabudirira, nzira iyi inopa zvakawanda zvekutonga kunouya kubva pakuvaka iwe pachako kuedza kwechokwadi uye vatori vechikamu vanobva mukushanda mune zvigadziriro zviripo. Uyezve, nzira iyi inogona kukwanisa kugadzira mhinduro yakanaka iyo apo mamwe tsvakurudzo anotungamirira kune zviri nani zvinogadzirwa zvinotungamirira kuvashandisi vakawanda vanotungamirira kune vamwe vanotsvakurudza nezvimwewo (mufananidzo 4.16). Mune mamwe mazwi, kamwe chete mazano akanaka loop akarovera, tsvakurudzo inofanira kuva nyore uye nyore. Kunyange zvazvo nzira iyi yakanyanya kuoma iye zvino, tariro yangu ndeyokuti ichava yakanakisisa se teknolojia inowedzera. Kusvikira panguva iyo, zvakadaro, kana muongorori achida kudzora chigadzirwa, inonyanya kuronga ndeyekushanda pamwe nekambani, musoro wandinotarisana nawo.
Mufananidzo 4.16: Kana iwe uchikwanisa kubudirira kugadzira chigadzirwa chako, unogona kubatsirwa nemashoko akanaka anonzi loop: tsvakurudzo inotungamirira kune chinhu chakanaka, chinotungamirira kune vashandi vakawanda, izvo zvinotungamirira kuongororo yakawanda. Izvozvi mazano ezvinyorwa zvinotsigira zvakaoma zvikuru kuumba, asi zvinogona kuita kuti tsvakurudzo isingakwanisi kuitika. MovieLens muenzaniso wepurojekiti yekutsvakurudza yakabudirira pakuumba rakanaka remhinduro loop (Harper and Konstan 2015) .